Manaova ny fanavaozana ny sary 4.1 amin'ny alàlan'ny logo, sary masina ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Na dia miatrika ny fiakaran'ny Adobe XD aza izahay, Sketch dia mbola fampiharana manokana ho an'ny fampiharana sy famolavolana tranonkala, ary ireo singa rehetra mahaforona azy ireo. Izay no mahatonga ny ekipa ao ambadiky ny fivoarany dia manohy miezaka mafy mitondra fanavaozana.
Navoaka ny Version 4.1 andro vitsy lasa izay ary anisan'ireo zava-baovao ao aminy, toy ny fiasa vaovao, no mety hitranga a nohavaozina ny interface sy ny endrika indray avy amin'ny sariny. Maimaimpoana ity fanavaozana ity ho an'ireo izay manana ilay fampiharana, izay mitentina € 94,45 amin'izao fotoana izao.
Ny fanovana miharihary indrindra dia ny sary famantarana ny fampiharana. Efa afaka miteny ianao veloma an'io diamondra io miaraka amina gradien marobe mampifanaraka izay ho volan'ny vatosoa sarobidy avo indrindra ampiasaina ho toy ny singa malaza indrindra rehefa mahatadidy ity fampiharana ity. Ankehitriny ny logo dia mandeha amin'ireo loko fisaka ireo, izay teny faneva ho an'ny ankamaroan'ny sary masina sy logo an'ny serivisy sy fampiharana maro hafa.
Nesorina tamin'ny sary famantarana ny app koa ireo gradients ary nanolo-tena hanana izany izy ireo fiteny famolavolana fisaka bebe kokoa hiara-hiasa amin'ny fanavaozana ny sary famantarana. Bohemian Coding, iray amin'ireo mpamolavola an'i Sketch, dia nilaza fa ity fijery misimisy kokoa ity dia hoentina any amin'ny faritra hafa amin'ny fampiharana sy ny maha-izy an'i Sketch ao anatin'ny volana ho avy.
Mandra-pahatongan'ity fanavaozana ity, isaky ny misy marika amin'ny rakitra dia azonao atao izany override lahatsoratra sy sary satria novaina izy ireo. Amin'ny Sketch 4.1, azonao atao ihany koa ny manitsy ireo tandindona rehetra, raha mitovy ny habeny, izay mamela anao hisolo kinova "off" amin'ny bokotra iray miaraka amin'ilay kinova nohatsaraina.
Ny fanatsarana hafa dia ny fahaizana miaro rakitra amin'ny alàlan'ny Sketch Cloud, safidy vaovao ao amin'ny menio "Mametaka amin'ny fombany" Fa rehefa te-hametaka lahatsoratra manan-karena amin'ny rindranasa ianao dia nohatsaraina ireo endrika, safidy ho an'ny fampifanarahana mijidina sy marindrano ary karazana bibikely isan-karazany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Sketch 4.1 dia mitondra interface misy nohavaozina amin'ity rindrambaiko famolavolana nomerika ity